Nzira yekuwedzera sei nguva yekurovedza muviri paApple Watch | IPhone nhau
Nzira yekuwedzera sei nguva kune yekurovedza muviri paApple Watch
Imwe yesarudzo yatinayo muApple smart wachi kwenguva yakati sarudzo yekuwedzera yakanyanya nguva yekurovedza muviri. Ichokwadi kuti vanhu vazhinji vandinoziva uye vanhu vandinokumbira zviri nyore vanoita kudzidziswa pavanotanga uye voremadza painopera ... Ichi chinhu chakajairika kuti kunyange ini ndinoita mukudzidzira, asi iwe unogona kuronga yakanyanya nguva mavari.
Kumisikidza nekumisa kudzidzira kwakajairika kunodaidzwa kuti "Mahara" paApple Watch uye kunoshandiswa chero kudzidziswa kwatinoita. Asi panguva ino tichaona imwe yesarudzo dzekudzidzisa dzatinadzo mukati meapp pachayo uye kuti vamwe vevaya havazivi, iyo nguva mukati menguva chero yekudzidziswa yakarongedzwa nemushandisi.
Tingawedzera sei yakakwira yekudzidzira nguva paApple Watch
Eya, iyi sarudzo iri nyore kwazvo kuitisa uye inogona kumisikidzwa yakananga kubva kuChiitiko chekushandisa wachi yedu. Kuti tiite izvi, isu tinoenda kune yakasvibirira icon ne "anomhanya munhu" kuti amise kurovedza muviri uye kamwe mukati tinotarisa kudzidziswa kwedu. Panguva ino tinofanirwa kubaya pamatanho matatu atinawo kumusoro kwekurudyi (…) tobva tadzvanya pa «Nguva».
Panguva ino tinowana huwandu hwatakasvika pakudzidziswa uku uye mukana wekumisikidza iyo nguva yekudzidzira yatinoda. Mune yangu nyaya, zvinomaka maminetsi makumi mana nemana asi ini ndinogona kuzvishandura kumusoro kana pasi ne - uye + chiratidzo chinoonekwa padyo nenguva, kana tangosvika pachinangwa ichi wachi inotitaurira kuti tapedza kudzidza kwedu uye tinogona kumira. Kana usingamise wachi inoenderera kuverenga pasina dambudziko saka usazvidya moyo nezvayo. Waiziva here nezve iyi sarudzo yekushanda paApple Watch?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Nzira yekuwedzera sei nguva kune yekurovedza muviri paApple Watch
Satechi M1, mbeva ye iPad yako uye yako Mac mune Apple maitiro